Krismasy any Eoropa
Zavatra, ary ny Krismasy dia ankalazan'ny Eoropeana amin'ny fomba lehibe sy amin'ny hafanam-po manokana. Saika mitovy amin'ny fifankatiavantsika amin'ny ankamaroan'ny Taombaovao rehetra. Amin'ny ankapobeny, ny Krismasy ao amin'ny kaontinanta dia malaza kokoa noho ny fahatongavan'ny taona vaovao. Ity fialantsasatra ity dia feno fifaliana, hafanana ary fahatsapana faobe amin'ny Eoropeana, amin'ny ankapobeny, ny atmosfera dia mahagaga sy mifindra. Eny ary, tsy hametraka izany ary hampahafantatra anao ny fomban'ny Krismasy any Eorôpa.
Rahoviana izy ireo no mankalaza ny Krismasy any Eorôpa?
Fantatra fa fotoam-pivavahana ara-pivavahana ny Krismasy, andron'i Jesoa Kristy izao. Ny ampahany betsaka amin'ny mponina any Eoropa dia mpiray finoana an'ny katolika, iray amin'ireo sampan'ny Kristianisma. Ny fankalazana ny katolika rehetra dia nankalazaina araka ny kalandrie gregorianina (tsy toy ny Orthodoxy, izay nampiasana ny kalandrie Juliana). Noho izany, ny datin'ny Krismasy any Eraopa dia mianjera amin'ny alin'ny 24 Desambra hatramin'ny 25 Desambra, fa tsy amin'ny 6 janoary hatramin'ny 7 janoary, toy ny any amin'ny tany izay heverin'ny Orthodoxy ho fivavahana lehibe indrindra.
Fomban'ny Krismasy katolika any Eorôpa
Amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa fombafomba maro mankalaza io andro manjombona io no mahazatra any amin'ny firenena rehetra ao amin'ny kaontinanta. Na izany aza, ny fanjakana tsirairay dia manana fomban-drazana manokana.
Mifanakaiky amin'ny Eoropeana rehetra ny fanorenana trano misy hazo malaza miaraka amin'ny kilalao, garlands ary labozia . Ny tanàna sasany dia manana sampana na ravin-kazo eo amin'ny varavarana, rindrina ary fiompiana iray.
Amin'ny Krismasy, mahazatra ny manome fanomezana ho an'ny ankizy, ho an'ny ankizy - amin'ny kiraro na kiraro mihantona amin'ny hazo krismasy. Ary misy angano iray izay manolotra maherifo maotera Santa Claus (Babbo Natale any Italie, Nikolaus any Alemana , Juleniss any Soeda, Papa Noel any Espana, Syanialis Saltis any Litoania), izay avy any Lapland amin'ny sambo iray nohadin'ny serfa.
Amin'ny takarivan'ny 26 Desambra, ny fianakaviana manontolo dia mihinana eo amin'ny latabatra iray, mihinana sakafo karaoty nentim-paharazana: turkey, kisoa, akoho na goose, mofomamy na mofomamy, mofomamy mofomamy, ginger biscuit ary gingerbread house.
Ny karatra fisaorana dia alefa ho an'ireo namana, havana, namana, mpiara-miasa. Ny tanàn-dehibe sy ny tanàna dia miorina amin'ny sehatra misy tarehimarika misy tarehimarika telo, mampiseho ny zaridaina, ny zaza kamboty, ny virjiny Maria sy i Joseph.
Amin'ny misasak'alina, ny ankamaroan'ny olona dia atao ao amin'ny fiangonana katolika rehetra.
Fialantsasatry ny Krismasy any Eorôpa
Azo antoka fa tsara kokoa ny mahita indray mandeha mihoatra ny in-jato (na vakiana). Afaka mahatsapa ianao fa ny atmosfera tsy manam-paharoa indrindra amin'ny fetibe, mankany Eoropa amin'ny alin'ny Krismasy.
Ny safidy ho an'ny fankalazana Krismasy tsy hay hadinoina tany Eorôpa tamin'ny taona 2015 dia maro. Tena mahaliana tokoa amin'izao fotoana izao any Alemaina . Ankoatra ny mahazatra ny fomba amam-panao, dia hanana fahafahana handaniana vola ianao ary hifalifaly amin'ireo tsena Krismasy malaza any Berlin, Cologne na Nuremberg.
Azonao atao ny mampifandimby miala sasatra miaraka amin'ny sakafo harivan'ny Krismasy ao anaty trano maizim-bahiny any amin'ny toeram-pialan-tsambo any Alpes . Ity diany ity dia atolotra ho an'ny orinasam-pianakaviana sy orinasa mahafinaritra.
Mikaroka boky tsy mahazatra ny fitsidihana mankany amin'ny faritra fizahan-tany any Finlande - Rovaniemi, fantatra kokoa amin'ny Lapland, toerana nahaterahan'ny maherifon'ny Krismasy - Santa Claus. Azonao atao ny manoratra taratasy ho an'ny Finno Santa Claus, mitsidika ny trano fonenany, mitsidika ny Park Ice, ary mandray anjara amin'ny fety fisaorana.
Ankafizo ny hatsarana sy ny hafanana amin'ny alina Krismasy 2015 ao Budapest renivohitra Hongroà . Fialan-tsasatra any amin'ny iray amin'ireo tanàna mahafinaritra indrindra any Eoropa - hetsika izany, ary raha ho an'ny Krismasy, dia tsy azo ovaina ny fahatsinjovana tsy hay hadinoina.
Poloney dia safidy lehibe ho an'ireo izay te hanaraka ny fomban-drazana Krismasy amin'ny fombafomba, fa tsy mandany vola be. Raha eny, ny tsiron'ny sakafo nentim-paharazana amin'ny sakafo hariva dia azo ampifandraisina amin'ny fanadihadiana momba ny fahitana mahavariana.
Inona no havoaka avy any Aotrisy?
Fametrahana seza ao anaty fiara
Fomba fanatsarana afo
Zava-mahatalanjona an'i Izhevsk
Vavaka ho an'i Nicholas ilay Mpandraharaha
Inona no mamaritra ny firaisana amin'ny zaza?
Ny vaksiny amin'ny tetanus - rahoviana?
Ny fihenan'ny alim-bary ho an'ny fahaverezan'aretina mandritra ny 7 andro
Dermatitis atopika amin'ny olon-dehibe - fitsaboana amin'ny fomba mahomby
Fanamboarana ny kitay hazo amin'ny lohataona
Honduras - toetrandro
Jameson Park sy ny Rosary
Nanjary reny ilay kintana "Hobbit" Evangeline Lilly
Ireo endri-tsolika ao amin'ny Pokrov
Tafio ny tafo miaraka amin'ny tanana manokana
Sakafo - Spring-Summer 2014